Xisbiga dowladda oo gudbiyay codsigooda ka mid noqoshada…
Xukuumadda dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta gudbisay shuruudihii looga baahnaa ee diiwaan gelinta Xisbiga dowladda, iyadoo laga guddoomay document-yada ka mid noqoshada Axsaabta siyaasadeed ee dalka.
Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda guddoonsiin doona Xisbiga dowladda shahaadada ku meel gaar ah ee lagu aqoonsado Xisbul-xaakimka Xukumadda.
Xisbiga talada haye Nabad iyo Nolol oo aan weli si rasmi ah loo shaacin magaca uu qaadanayo ayaa waxaa guddoomiye ka noqonayo ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.
Dhanka kale hhirka Guddi hoosaadka Tubta Siyaasadda loo dhanyahay oo maanta lagu qabtay Muqdisho ayaa lagu falanqeeyay sidii loo fulin lahaa amarkii Ra’iisul Wasaaraha ee ahaa in xukuumaddu si buuxda uga shaqayso hirgalinta doorashada dalka oo xilligeeda lagu qabto.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa furay shirka Guddi hoosaadka Tubta Siyaasadda loo dhanyahay, waxaana guddoomiyay Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar).
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Marwo Xaliimo Ismaaciil Ibrahim ayaa sheegtay in ay guddigu diyaariyeen tallaabooyinka farsamo ee laga sugayay guddiga si loo hirgeliyo doorasahada.
“Kulanka ayaa looga dooday baahida degdegga ah ee loo qabo wada tashi loo dhanyahay oo ay yeeshaan dowladda Federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada, si loo hirgeliyo doorasho loo dhan yahay oo xilligeeda ku qabsoonta” ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Waxaa socda dadaalo badan oo ay xafiisyada Xukumadda wadaan taas oo ku aadan diyaar garowga Doorashada iyada oo xusid mudan, in aanay weli kala caddeyn mowqifka siyaasiga ee wadajirka Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ee doorashada 2021.